मन्दिर बाहिर भिख माग्दै बसेका करोडपति युवकलाई आफ्नी बहिनीले भेटेपछि...
एजेन्सी । भारतको हरियाणाको अम्बाला क्यान्टको पुरानो अनाज मन्डी मन्दिर बाहिर दुई वर्षदेखि भिख माग्दै आइरहेको युवक करोडपति रहको पत्ता लागेको छ । दुई बहिनीहरुको एक्लो भाई उनी आजमगढका बासिन्दा हुन् । उनको वास्तविक नाम धनञ्जय ठाकुर हो तर मन्डी आउने–जाने मानिसहरु उनलाई जटाधारी भन्ने गर्थे । विस्तृतमा
१० वर्षीय बालकले १३ वर्षीया बालिकालाई गर्भवती बनाएको भनेपछि...
मिस्ड कलबाट भएको प्रेम : ६० वर्षीया महिलासँग २० वर्षीय युवकले बिहे गरेपछि...
वाइन बाँकी रह्यो ? अब वाइन कण्डम लगाइदिनुस...
विश्वमा लाखौं मानिसहरु अपराधमा संलग्न छन् । ठगी, डकैती, चोरी, आतंकवाद, लागुपदार्थ तस्करी, हत्या, अपहरण र युद्ध अपराधहरु
विश्वकै सबैभन्दा ठुलो भान्छा
विश्वको सबैभन्दा ठुलो भान्छा कहाँ रहेको छ ? सायद यसबारे कमै मानिसहरुले ध्यान दिने गर्छन् ।
जब यी कुख्यात डाँका फिल्मी शैलीमा जेलबाट भागे
पेरिस, फ्रान्स । कुनै समय फ्रान्सको उच्च खोजीको सूचीमा रहेका तर पछिल्लो केही समय यता जेल सजाय भोगिरहेको कुख्यात चोरले
जुम्ल्याहा बच्चाका फरकफरक पिता यकिन भएपछि अदालतमा बबाल
अमेरिका । चिकित्सा विज्ञानमा जुम्ल्याहा बच्चाका फरकफरक पिता हुनुलाई अत्यन्तै दुर्लभ मानिन्छ । यस्तै दुर्लभ घटना अमेरिकाको न्यूजर्सीस्थित अदालतमा पेचिलो मुद्दा भएको छ ।
तनाबले सताएको छ ? यस्ता उपायहरु अपनाउनुहोस्
काठमाडौँ । आफ्नो जस्तै रुची भएका ब्यक्तिहरुको समूहमा सहभागी हुने र रुचिका बिषयमा कुराकानी र भावना बिचार आदानप्रदान गर्न तपाइलाई मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ ।